फानी भनेको के हो ? कसरी राखियो यो नाम ? यस्तो छ हेर्नुहोस « Np Online TV
फानी भनेको के हो ? कसरी राखियो यो नाम ? यस्तो छ हेर्नुहोस
भारतको पूर्वी तटतर्फ अघि बढेको फानीबाट हुने सम्भावित क्षती कम गर्न भारत सरकारले प्रभावित क्षेत्र अर्थात समुन्द्र किनारमा रहेका मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिरहेको छ । त्यसक्रममा करीब ८ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । बंगालको खाडीबाट झण्डै दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा भारतको उडिसातर्फ बढिरहेको फानी नाम गरेको समुन्द्री आँधीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ ।
भारतको आन्द्रप्रदेश र तामिलनाडुमा फानीको उच्च जोखिम रहेको बताइएको छ । उक्त फानीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले जनाएका छन् ।
त्यसको प्रभावस्वरुप शुक्रवार विहान देखि काठमाडौं लगायका स्थानको मौसम बदलि भएको छ । दिउँसै अध्यारो जस्तो हुन गएको छ । गृहमन्त्रालयले हेलिकोप्टर नउडाउन आग्रह गरेको छ भने तराईका केही स्थानका विद्यालयहरु समेत बन्द गरिएका छन् ।
गृहमन्त्रालका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले फानीको प्रभावले केही स्थानमा आँधी र हुरी आउने सम्भावना रहेको र त्यसबाट हुने सम्भावित विपद्पछिको उद्धार र राहतका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
फानीकै कारण केहिबेरपछि काठमाडौंसहित देशभर हावाहुरी चल्ने मौसमविद विभूति पोखरेलले खबरहबलाई जानकारी दिइन् ।
‘अब केहीबेरमा काठमाडौंसहित देशभर हावाहुरी चल्न थाल्नेछ । यसबाट सबै सचेत हुनुहोस्,’ पोखरेलले भनिन्न् ‘हावाहुरीबाट बच्न चाल्नुपर्ने सतर्कताका बारेमा सबै एलट हुनु आवश्यक छ ।’
ओडिशाबाट सो समुद्री आँधी बाङ्ग्लादेशको चटगाउँतिर जानेछ। शनिवार त्यहाँ पुग्दा भने फानीको वेग र शक्ति घट्ने मौसमविद्हरू बताउँछन्।
कस्तो आँधी वा हावाहुरीको नाम राखिन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार त्यस्तो आँधी वा हावाहुरीको नाम राखिन्छ जसको गती ६३ किलोमिटर प्रतिघन्टा हुन्छ । यस्तोमा जव यो हुरीको रफ्तार ११८ किलोमिटर प्रतिघन्टा सम्म हुन्छ त्यतिबेला यस्तो हुरीलाई गम्भीर प्रकृतिको हावाहुरीको श्रेणीमा राखिन्छ । यस्तै २२१ किलोमिटर प्रतिघन्टाको रफ्तारमा आउने हावाहुरीको नाम चक्रवाती हावाहुरी दिइएको छ ।
फानीको अर्थ यस्तो छ
हिन्द महासागमा उठेको यो हुरीलाई बंगलादेशले फानी नामाकरण गरेको थियो । बंगलादेशमा फानीको सम्बन्ध सर्पसँग हुन्छ । फानीको प्रयोग विध्वंश या नोक्सानको रुपमा लिने गरिएको छ । फानीको शाब्दिक अर्थ ‘सर्पको फडा’ सँग सम्बन्धित छ ।यस्तो हावाहुरी विश्वको जुन महासागमा उत्पन्न हुन्छ त्यसको नाम नजिकको राष्ट्रले राख्ने गरेका छन् ।